पत्रकार निर्वाचनमा कोही साँच्चिकै श्रमजीवी, कोही भ्रमजीवी !
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिपत्रकार निर्वाचनमा कोही साँच्चिकै श्रमजीवी, कोही भ्रमजीवी !
सबै पत्रकारले आफ्नो सङ्गठनको सबै तहको नेतृत्व चयनका लागि पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने भएको कुरालाई कन्टिर–बाबूले निकै महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । कन्टिर–बाबूको विश्वास छ, प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीमा गएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ हिजो–अस्तिको तुलनामा भविष्यमा अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बन्नेछ ।
सदस्यता शुद्धीकरणको आवाज उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा, प्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियामा जानेबित्तिकै, महासङ्घमा करिब पाँच हजार सदस्यको सदस्यता नवीकरण भएन । ले घास, अरे पहिले प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन प्रणाली हुँदा हुनेखानेहरू केन्द्रीय पार्षद् बनेर राजधानी घुम्न र पार्षद्गिरीको धाक जमाउन टुटपुजिया आसेपासेलाई पनि सदस्य बनाउँथे । अब प्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियापछि विचरा पार्षद–व्यापारको बेहाल भएको छ । अब त सब सदस्यले मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवार बन्न पाउने भएपछि कुरो खलास नि !
कन्टिर–बाबूको आग्रह छ, मतदाताले उम्मेदवार चयनमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसो त अनेक मतदातालाई आफ्नो मत बिजुली पानीसँग साटेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर विचरा कन्टिर–बाबू यस्तो आरोप पचाउन सकिरहेका छैनन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हेर्नुस्– जो कोही पनि उम्मेदवार बन्न पाएका छन् । बडा गजब–गजबका उम्मेदवारहरू सार्वजनिक भएका छन्, कोही प्यानलमा कोही बेप्यानलमा । कोही प्रतिगमनको पक्षमा कोही विपक्षमा । कोही लोकतन्त्रवादी त कोही लोकतन्त्रविरोधी । कोही साँच्चैका श्रमजीवी त कोही श्रमको नकाबधारी अर्थात् भ्रमजीवी । कोही उठौवा–बैठौवा त कोही उठौती–पठौतीवाला । कोही श्रम गरुवा त कोही श्रम मरुवा । अनेक अनुहार अनेक प्रवृत्ति हेरेर कन्टिर–बाबू दङ्गदास छन् ।
यसै भिडमा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका सच्चा पक्षपाती पनि छन् । श्रमजीवीको पक्षमा उभिने पनि छन् । सत्याग्रही पनि छन् । कोही सरकारका विरोधी, कोही समर्थनमा उत्रिने, कोही होलेहोलेमा डुब्ने पनि छन् ।
के गर्नु बिरादरीमाथि लागेको आरोपबाट विचरा कन्टिर–बाबू व्यथित त छन् नि तर व्यथित भएर के गर्नु ? हावा नचली पात हल्लिन्न, आगो नलागी धुवाँ उडदैन । कोही त्यस्ता छन् भने केको लोकतन्त्र, केको प्रेस स्वतन्त्रता ? केको सरकारको विरोध ? केको सञ्चारमैत्री कानुन र नीति ? सबैसँग सम्झौता गर्छन् यिनले । कन्टिर–बाबूका अनुसार लोकतन्त्रको विरोध गर्ने पत्रकारभन्दा यस्ता मतदाता चाहिँ बढी खतरनाक हुन्छन् । ढिलो–चाँडो सबैलाई चेतना भया ।
पत्रकार भ्रमजीवी श्रमजीवी